निर्मला पन्तहरु - परिहास - नेपाल
एउटै निर्मलाले सरकारको टाउको खाइरहेको छ । अहिले बजारभरि निर्मलै निर्मला मात्र देखिन्छन् । जो भेटे पनि त्यही भन्छ– म पनि निर्मला ! जो पनि आफूलाई निर्मला नै ठान्छन् । देशमा यति धेरै निर्मलाहरु जन्मेको देखेर सायद सरकार पनि छक्क परेको होला । किनभने, परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रममा राज्यले त्यत्रो पैसा खर्च गरिरहेको छ । तापनि निर्मलाहरु जन्मेको जन्म्यै । के यो परिवार नियोजन कार्यक्रमको असफलता हो ?
अर्को कुरा, जति पनि यी नयाँ निर्मलाहरु जन्मिए, सबै जना एउटै कुरा भनिरहेका छन्– अपराधीलाई कारबाही गर । जहाँ गए पनि एउटै माग– अपराधीलाई कारबाही गर । यो ‘अपराधीलाई कारबाही गर’ भन्ने माग बजारमा यसरी चर्काइएको छ, मानौँ– सरकारले कसैलाई कारबाही नै गरेको छैन ।
यसो आँखा घुमाएर त हेर्नुस्, कारबाही त प्रशस्तै गरिरहेको छ नि । नगरेको कहाँ छ र ? निर्मला पन्त काण्डसँग जोडेर सरकारले जाँड खाने जाड्याँहा, मानसिक सन्तुलन बिग्रेका, मूला चोर्नेहरु, फर्सी चोर्नेहरु, पाकेट मार्नेहरु जे जति भेट्टाए सबैलाई कारबाही गरेको छ । निर्मलाको फोटो टाँस्नेलाई पनि कारबाही गरेको छ । निर्मलाको नाम लिएर सडकमा पल्टिनेलाई कारबाही गरेकै छ । हुँदाहुँदा अब निर्मला पन्तको नाम लिनेसम्मलाई पनि कारबाही गर्ला कि जस्तो अवस्था आइसकेको छ । यति तीव्र गतिमा कारबाही चलिरहेको छ । तर पनि ‘अपराधीलाई कारबाही गर’ भन्न रोकिएको छैन । खासमा भन्न खोज्याचाहिँ के ?